Aftida UK ee Midowga Yurub. - BBC Somali
Aftida UK ee Midowga Yurub.
Dalka UK waxaa uu heli karayaa hab dadka soo galootiga ah lagula dhaqmo oo sida hadda ka caddaalad badan, kana bani'aadanimo badan oo dhaqaalaha dalka si ka wanaagsan sida uu hadda yahay ugu shaqeynaya, haddii uu ka baxo Midowga Yurub, sidaas waxaa sheegay dadka u ololeynaya ka bixitaanka midnimada Yurub.
Michael Gove, Boris Johnson iyo Priti Patel oo iyagu ka tirsan xisbiga Conservative ee xukunka haya iyo Gissela Stuart oo ka tirsan xisbiga labour-ka waxay ku baaqayaan in hab ku dhisan dhibco lagu qaato dhammaan dadka soo galowga ah ee imanaya dalka Uk.
Waxay sheegayaan in xeerarka xaqa u siinaya dadka Midowga Yurub oo dhan inay si xor ah isaga gudbaan waddammada ay hoos u dhigeen mushaaharooyinka, ayna culays ku noqdeen adeegyada dadweynaha la siiyo.
Dadka u ololeynaya in Yurub laga sii mid ahaado waxay sheegayaan in hindisahaasi uu burburinayo dhaqaalaha UK, uuna sare u qaadi karayo tirada dadka soo galowga.
Dhinaca kale, xiriirka guud ee ururrada shaqaalaha dalkan UK waxay daabacayaan cilmi-baaris ay ku sheegayaan in celcelis ahaan mushaharka shaqaalaha UK ay 38% hoos u dhici doonaan toddobaadkii marka la gaaro sanadka 2030 haddii ay dibadda ka noqdaan Midowga Yurub, taas oo qayb ka ah taageerada ururkaasi uu ku doonayo inuu dadka ku dhiirri geliyo inay u codeeyaan ku jiritaanka Yurub aftida la qaadi doono 23 bishan Juun.
Britain waxay hadda leedahay hab dadka soo galowga ah ee ka imanaya waddammada ka baxsan Midowga Yurub dhibco lagu qaato si ay dalkan uga shaqeeyaan.
Waxaa macnaheedu yahay in la qaato dadka loo maleynayo inay dhaqaalaha dalkan wax ku kordhinayaan oo keliya, sida shaqaalaha xirfadaha sare leh ee sahqadooda loo baahan yahay ama ganacsata qaniga ah iyo kuwa maalgelinta sameeya.
Dadka soo galowga ah ee leh xirfadaha shaqo ee loo baahan yahay ayaa Visa la siiyaa, habkaas oo inta badan loogu yeero nidaamka Australia, maadaa ay yihiin kuwii ugu horreeyay ee habkan soo saaray.
Dad badan ayaa habkan sanad walba dalkan UK ku yimaad, kuwaas oo u dhashay waddammo ay ka mid yihiin India, Pakistan Maraykanka, kuwaas oo ka badan dadka ka ymid waddammada Midowga Yurub, inkastoo tirada ka imanaysa Midowga Yurub ay sannadahan dambe sare u kacday.
Dadka u ololeynaya in Midowga Yurub laga baxo waxay doonayaan in habka dhibcaha dadka lagu qaadanayo lagu dabaqo kuwa ka imanaya waddammada Midowga Yurub, kuwaas oo hadda xaq u leh inay yimaaddaan UK kana shaqeystaan, hawlo ay ku jiraan shaqooyinka hoose, laakiin dowladda xukunka haysa ayay ku xirnaan doontaa inay siyaasaddaas qaadato iyo in kale.